35 योगको बारेमा प्रेरक उद्धरणहरू स्वयं सहायता संसाधनहरू
मारिया जोस रोल्डन | 03/05/2021 19:05 | अद्यावधिक गरियो 30/04/2021 15:14 | वाक्यांशहरू
धेरै व्यक्तिहरूको लागि, तिनीहरूले योगलाई यसको महत्त्व दिँदैनन्। वास्तवमा, त्यहाँ व्यक्तिहरू छन् जुन उनीहरूले यो प्रयास गर्छन् र महसुस गर्छन् कि यो अनुशासनले उनीहरूको जीवनमा के ल्याउँदछ, तिनीहरूले अब यो गर्न रोक्न सक्दैनन्। यी सबैको लागि, हामी तपाईंलाई योगको बारेमा केही प्रेरक कथनहरूको बारेमा बताउन जाँदैछौं।
किनभने यस तरीकाले, तपाईं यो अनुशासन र यसले तपाईंलाई ल्याउने सबै कुरा बुझ्न सक्नुहुनेछ। तपाईं यी वाक्यांशहरूको लागि धन्यवाद प्रतिबिम्बित गर्न र ध्यान दिन सक्षम हुनुहुनेछ र बुझ्नुहुनेछ कि योग केवल केहि मानिसहरू मात्र केहि चीज होइन जुन शरीर र दिमागलाई जोड्न सम्पूर्ण अनुशासन हो। यो पनि खेल को रूप मा मानिन्छ जब शरीर को मांसपेशिहरु को काम गरीरहेको छ।
यी प्रकारका वाक्यांशहरूले तपाईंलाई शरीर र आत्मा बीचको सन्तुलन खोज्नुको महत्त्व पनि प्रकट गर्दछ, किनकि दुबै आपसमा जोडिएको छ र एउटाको ख्याल राख्न तपाईंले अर्कोको ख्याल गर्नुपर्छ। यसले शरीरलाई पनि तालिम दिन मद्दत गर्दछ आराम दिमाग. मानव शरीरको उचित कार्यको लागि केहि आधारभूत।
योगले तपाईंलाई ठूलो फाइदा दिन्छ जब सम्म तपाईं यसलाई निरन्तर अभ्यास गर्नुहुन्छ किनभने यो केवल खेल हो, राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न यो तपाईंको लागि जीवनको मार्ग हुनुपर्दछ। यस तरिकाले तपाईं आफ्नो अस्तित्वमा आउनुहुनेछ।
वास्तवमा, योग गर्न सक्षम हुन तपाईंले न केवल आसनहरू वा आसनहरू सही रूपमा गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, तर पनि तपाईंले यसका सासहरू र शारीरिक र मानसिक विश्रामको सिद्धान्तहरू पालना गर्नै पर्दछ। त्यसोभए मात्र तपाईंले सबै मानसिक शक्ति पाउनुहुनेछ जुन तपाईंले आफूभित्र लुकाउनु भएको थियो।
तपाईंसँग तपाईंको जीवनमा त्यो सबै महत्त्वपूर्ण सन्तुलन हुनेछ। तपाईंले त्यो हजारौं अभ्यासमा त्यो शान्ति धन्यवाद पाउनुहुनेछ। किन यो सहस्राब्दी हो? किनभने यो तेस्रो शताब्दीमा भारतमा अभ्यास गरिएको थियो। ईसापूर्व र सँधै खुशी खोजेको छ।
योगका बारे वाक्यांशहरू
यी वाक्यांशहरूले तपाईंलाई अनुशासनका केही सिद्धान्तहरूको सम्झना दिलाउँदछ, जस्तै कि यदि तपाईं आनन्द प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं पहिले आन्तरिक ज्ञानको माध्यमबाट जानु पर्छ। तपाईको बिचार र भावनाहरुको विश्लेषण, पूर्वाग्रह वा पूर्व धारणाहरू हटाउँदै।
त्यसकारण, यो व्यायामले विभिन्न आसनहरू गर्ने मात्र होइन तर तपाईंको दिमाग तपाईंको शरीरको नायक हो। यी सबैको लागि, हामी तपाईंलाई निम्न वाक्यहरू पढ्न आमन्त्रित गर्दछौं, किनभने यदि तपाईंलाई योग मनपर्दछ भने तपाईंलाई मनपर्दछ, र यदि तपाईंले यो कहिले अभ्यास गर्नुभएन भने उनीहरूले तपाईंको विश्वमा नयाँ ढोका खोल्नेछन्।
राम्रो बानीको बीउ तुरुन्तै रोप्नुहोस्, यो अलि अलि बढ्नेछ।
दिंदा हामीलाई असफल हुँदैन, न त पछि समातेर समृद्ध हुन्छ।
जो निराश, निराश, मानसिक पतनको नजिक छन्, योगले भावनालाई माथि उठाउँछ।
तपाईं जति धेरै राम्रा विचारहरूसँग ध्यान दिनुहुन्छ, तपाईंको विश्व र सामान्य रूपमा संसार राम्रो हुनेछ।
साँचो ध्यान असुविधा र चुनौतिहरू सहित सबैको साथ पूर्ण रूपमा उपस्थित हुनु हो। यो वास्तविकता बाट उम्कन छैन।
तपाईको दिमाग, शरीर र आत्माको सम्भाव्यता मुक्त गर्न तपाईले पहिला कल्पनाको विस्तार गर्नुपर्दछ। चीजहरू सँधै दुई पटक सिर्जना हुन्छन्: पहिलो दिमागको कार्यशालामा र त्यसपछि वास्तविकतामा।
ब्रह्माण्डसँग मिल्दोजुल्दो जीवन, आनन्द र प्रेमले भरिएको छ।
शरीर संस्था हो, शिक्षक भित्र हुन्छन्।
आसनको पूर्णता हासिल गरेको बिना, ऊर्जा प्रवाह गर्न सक्दैन।
योगले तपाईंलाई जीवनमा पूर्तिको भावनालाई पुन: खोजी गर्न मद्दत गर्दछ, यदि तपाई निरन्तर टुक्रिएको टुक्राहरू सँगै राख्नको लागि प्रयास गरिरहनु भएको जस्तो महसुस नगरी।
प्रेम बिना सन्तुलन छैन, र सन्तुलन बिना प्रेम छैन।
योग टाउकोको बौद्धिकताका साथ हृदयको बुद्धिको साथ गर्नुपर्दछ।
सीमित समझले मात्र अरूलाई सीमित ज्ञान प्रदान गर्न सक्छ।
शब्दहरू नष्ट गर्न र निको पार्ने शक्ति छ। जब शब्दहरू सत्य र दयालु हुन्छन्, तिनीहरूले विश्व परिवर्तन गर्न सक्दछन्।
योग तपाईं को हुन् भन्ने बारेमा जिज्ञासु हुनु उत्तम अवसर हो
याद राख्नुहोस्, यसले फरक पार्दैन कि तपाईं कती गहिराइमा पोजमा जानुहुन्छ। मुख्य कुरा के हो तपाईं को हो तपाईं त्यहाँ पुग्दा।
योग तपाईंको खुट्टा छुने बारेमा होइन, यो तपाई जुन मार्गमा सिक्नु भएको छ।
तपाईं योग गर्न सक्नुहुन्न। योग एक प्राकृतिक राज्य हो। तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ योग अभ्यासहरू हुन्, जसले तपाईंको प्राकृतिक अवस्थाको प्रतिरोध गरिरहँदा प्रकट गर्न सक्दछ।
जब तपाईं सास लिनुहुन्छ, तपाईं भगवानको शक्ति मा लिनुहुन्छ। जब तपाईं श्वास छोड्नुहुन्छ, यो तपाईंले संसारलाई दिने सेवाको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
जीवन केवल पछाडि फर्केर बुझ्न सकिन्छ, तर यो केवल अगाडि हेरेर बाँच्न सकिन्छ।
जो आफूलाई उच्च विकसित मानिस ठान्छन् र आफैमा गर्व गर्छन्, योगले अहंकारलाई काट्छ।
योग परिवर्तनकारी हो। यसले हामीले चीजहरू हेर्ने तरिका मात्र परिवर्तन गर्दैन, तर व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्ने परिवर्तन गर्दछ।
योग कुनै पनि हिसाबले कुनै विशेष संस्कृतिको लागि धर्म वा डगमास होइन।
तपाईं सिक्न कोसिस गर्दा, श्रद्धापूर्वक तपाईंले सिकेको कुरा अनुसरण गर्नुहोस्।
स्वतन्त्रता डर र इच्छा को जंजीरबाट स्वतन्त्र छ।
शरीर तपाईंको टेम्पो हो। यसलाई बस्ने र आत्माको लागि यसलाई सफा र शुद्ध राख्नुहोस्।
योगले हामीलाई वर्तमान क्षणमा ल्याउँदछ, एक मात्र स्थान जहाँ जीवन अवस्थित छ।
ध्यान र आध्यात्मिक मार्ग को एक सिद्धान्त यो छ कि यदि तपाईं वास्तवमा को हुनुहुन्छ संग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं शान्त हुनुहुन्छ।
अभ्यास गर्ने जो कोही पनि योगमा सफल हुन सक्छ, तर अल्छी व्यक्ति होईन। केवल निरन्तर अभ्यास सफलताको रहस्य हो।
परिवर्तन हामीले डराउनुपर्ने कुरा होइन। यसको सट्टा, यो हामीले मनाउने कुरा हो। किनभने परिवर्तन बिना, यस संसारमा केहि बढ्नेछ वा फस्टाउनेछैन र यस संसारमा कोही पनि व्यक्ति बन्न अघि बढ्नेछैनन् जसको लागि तिनीहरू निश्चित छन्।
योग विश्वमा अवस्थित छ किनकि सबै चीज जडित छ।
जनावरहरूको रूपमा, हामी पृथ्वीलाई बसोबास गर्छौं। ईश्वरीय सारको वाहकको रूपमा, हामी ताराहरू मध्ये एक हौं। मानव जातिको रूपमा, हामी बीचमा छौं, कसरी हाम्रो जीवन बिताउने भन्ने विरोधाभास समाधान गर्न खोज्दै हामी केहि अधिक स्थायी र गहिरा कुराको चाहना गर्छौं।
तालको शान्त पानीले यसको वरपरको सुन्दरता झल्काउँछ। जब दिमाग अझै छ, आत्म को सुन्दरता यो मा प्रतिबिम्बित छ।
आत्मविश्वास, स्पष्टता, र अनुकम्पा शिक्षकको लागि आवश्यक गुणहरू हुन्।
आध्यात्मिक अनुभूति चाहना हो जुन हामी सबैमा अवस्थित छ र यसले हामीलाई ईश्वरीय मूल खोजी गर्न धकेल्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्वयं सहायता संसाधनहरू » पुनरावृत्त » वाक्यांशहरू » About 35 योगको बारेमा प्रेरक उद्धरण